कुन दिन बढी महिलाले यौन सम्पर्क गर्न खोज्छन ? – Sawal Nepal ||The Power of Information
कुन दिन बढी महिलाले यौन सम्पर्क गर्न खोज्छन ?
२०७६ असार २९, आईतवार १६:२५ मा प्रकासित
काठमाडौं : महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ । एक अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । यौन विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखि महिनावारी पूरा भएपछि यौनका लागि उत्तेजित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ । अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे ।
त्यस अनुसार, महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवासले बढी रमाइलो अनुभूति दिन्छ । यस्तो किन हुन्छ, पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म गर्भाधारणको सम्भावना बढ्छ । यसैले यस अवधिमा सम्पर्कको तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ । त्यो सर्वेक्षणमा युवतीहरूले महिनावारीपछिका तीन दिन पूर्ण यौनानन्दको चाहना राख्ने गरेको बताए ।